By सपनासंसार February 02, 2009
रुप, रङ्ग उडाएर
चुस्न सम्म चुस्यौ ।
उपभोग गर्यौ ।
यो धर्म कर्ममा ।
रङ्गीन स्वरुपका फूलहरु Û
यो मन चोर्यौ
आज सम्म नभरीएको लोभ
तिमीले नै भर्यौ
म लोभी होइन
तिमीले लोभ्याई दियौ ।
मलाई के थाह ?
आफ्नो रुपले लोभ्याएर
रसपान गराई दियौ
स्वर्ग देखाई दियौ
बानी लगाई दियौ
म पापी होइन ।
सोध प्रतेक भमराहरुलाई
उँ संग मन, मुटु छ
माया, ममता, प्रेम छ
हरेक फूलहरु संग बस्छ ।
तिम्रो नाई नास्ती भए
म के गर्न सक्छु र ?
यो मन र तनलाई
डाँक्ने र लाने
दिने र खुवाउाने
तिमी फूलहरु ,
स्वयमलाई रुवाउादै छौ
म निष्ठुरी होइन ।
हे फूलहरु Û
मेरो दोष देखाई
मलाई गाली नगर
यो तिम्रो रुप, रङ्गं र
बानी ब्यहोरा नै
स्वयमको अभिषाप हो ।